Fadqalalada Faroole oo far dheeraatay ku ah xiliga kala guurka
Updated About:317 days ago 0
(Warfaafiye.com)-Xubnaha iskood isu magacaabay ee saxiixayaasha Road Mapka ayaa kulankoodii ugu danbeeyay ee Nairobi ku kala qeybsamay, waxaana soo dhex galay damacyo siyaasadeed iyo loolan awoodeed ee lagu kala aragti duwan yahay.
Gaas iyo Faroole ayaa la yimid isbaheysi beeleed oo ay rabaan iney xukunka dalka ku gaaraan, laakiin loo maleynayo isku haleyntooda iney ku saleysan yahay kaliya taageerada xubnaha Baarlamaanka ku soo geli doona magaca beeshooda.
Waxaa is hor taagan odayaasha dhaqanka ee Gobolada deegaanada bari iyo Faroole oo ay isku heystaan qaabka xulitaanka xildhibaanada cusub. waxaa moodaa Faroole inuu isu heysto maamul beeleedkiisa inuu yahay isha awooda u leh iney soo xulaan Xildhibaanada dhankooda ka imaanaya, taasoo khilaafsan heshiisyadii hore ee Garoowe1 iyo Garoowe2 lagu gaaray, kaasoo qeexaya odayaasha dhaqanka iney sharciyan yihiin kuwa mas’uulka ka ah xulitaanka mudanayaasha cusub.
Shakiga iyo fadqalalada la gelinaayo habsami u socodka Roadmapka ee xiliga kala guurka waxay kasoo jeedaan dhaqamo hore. Marka dib loo fiiriyo dhaqamadaas waxay sawir ka bixinayaan xusuusyo taariikheed kuna saabsan xiligii kala guurka ee midnimada iyo xorriyadda Soomaaliya ku qaadaneysay. Siyaasiyiin u jahwareersan sida Faroole iskuna beel yihiin ayaa waqtigaasi isku dayay iney ka horyimaadaan Midnimada iyo Jamhuuriyada dhalaneysa, kadib markii ay ka dhex aqrisan waayeen ajande iyo damacyo siyaasadeed oo ay lahaayeen.
Waxay isku dayeen in xiliga Gobonimada dib loo dhigo, xukunka gumeysigana sidiisa ahaado, taasoo suurageli weyday, taariikhdaas mid la mid ah ayaa hada Faroole iyo Gaas danihii Qaranka ku badalanayaan damacyo qabiileed iyo ajandooyin siyaasadeed oo ay wadamo shisheeye wakiil looga yahay, gaar ahaan kuwa deriska.
Faroole Labo bil ka hor wuxuu isku dayay inuu carqaladeeyo wada hadalkii Madaxweyne Shariif iyo Siilaanyo, hadii ay dhabowdo midnimada Soomaaliya, Faroole iyo inta la fikirka ah waxay ka dagaalamayaan Muqdisho iyo Hargeysa Kow iyo Labo iney kala noqdaan marka ay timaado awood qeybsiga Dowladeed ee dib u heshiisiinta lagu mideynayo Soomaaliya.
Waxay dad badan ka xun yihiin siyaasadaha iyo loolanka socda inuu Axmed Maxamed Caalim fahmi waayo kuna qaldamay inuu daadihiyo hoggaan uusan u bisleyn, kadib markuu iska raacay la tashi la’aan hadafyada Faroole.
Ka maqnaanshaha loolankaasi Galmudug waxay Faroole u saamaxday inuu Kubadda dhinacoow doono u tuuro, laakiin goolasha uu la haleeli la yahay, sababtoo ah sumcad xumada uu ku leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed dhexdiisa.
Intii la isku qaban qaabinayay kulankii Hillary Clinton, Faroole wuxuu hawada gashaday inuu gooni faqo Xoghayaha arrimaha dibada ee Dowladda Mareykanka. yacni heerka mastawaha dowlad weyn oo la kulmeysa deegaan ka mid ah Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaan ku jirin xushmada hab maamuuska Dowliga ah, Faroole oo maqaamkiisa ku qaldaya iney ka weyn tahay tii Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo nidaamka dowliga ah intaba, sidaas darteed ilaa hada waxaa la la’yahay siyaasi Soomaaliyeed oo fahmi kara aragtiyada xeerarka ka baxsan ee Faroole ku dhaqmaya.
Faah-faahin:Weerar maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ee Muqdisho
Tartanka Cecafa oo ka furmay Sudan, Darfur iyo Kordofan
Maroodijeex iyo Hawd oo isugu haray tartanka Somaliland
Qoddobadii uu ka sheegay Raysal wasaaraha shirka Waxbarashadda Muqdisho
Raysal Wasaaraha oo furay shirka dib-u-soo noolaynta waxbarashadda
Xiisad ka taagan Kismaayo iyo sarkaal sare oo lagu dhaawacay
Sawiro:Shirka dib’uhabeynta waxbarashada dalka oo Muqdisho ka furmay
Kenya oo billowday inay dib u soo celiso qoxootiga Soomaalida
Cecafa to begin in Sudan’s Darfur and Kordofan despite unrest
Kenya Seeks Asian Support For Efforts To Repatriate Somali Refugees
Education will be the foundation of a new Somalia, Prime Minister says
Kenya: Kenya begins process of repatriating one million Somali refugees
Somali Umpire Picked Up For CECAFA Club Cup Opening Match Today